Iindaba - ISENZO Esitsha Sazisiweyo esiZimeleyo sokuvuza kwegesi yoRhwebo iiAlarmAEC2335 LPG kunye nezichongi zegesi yeNdalo kwiiKhitshi zoRhwebo kunye nezokutyela.
ISENZO Esitsha Saziswe ngokuZimeleyo zokuvuza kwegesi yoRhwebo AEC2335 LPG kunye nezichongi zegesi yeNdalo kwiiKhitshi zoRhwebo kunye nezokutyela.
ISENZO Esitsha Sazisiweyo ngokuZimeleyo kokuvuza kwegesi yoRhwebo iiAlarmAEC2335 eziZimeleyo zeLPG kunye nezichongi zegesi yeNdalo kwiiKhitshi zoRhwebo kunye nezokutyela.
Kwangomhla we-12 kuNovemba ka-2021, i-Bureau kaMasipala yezindlu kunye nophuhliso lwamaphandle yasezidolophini yakhupha isaziso sokomelezwa ngakumbi kulawulo lokhuseleko lokusetyenziswa kwerhasi (ekubhekiselelwe kuyo emva koku njengesaziso).Esi saziso sifuna ukuba bonke abasebenzisi bemizi-mveliso, abarhwebi kunye nezentlalontle (amashishini, iivenkile ezithengisa ukutya, ukutya, izibhedlele, izikolo, iicanteens kunye namakhaya abantu abadala, njl.njl.) esixekweni mabayile kwaye bafakele.iialamu zokuvuza kwegesi yorhwebo, iivalve zokuvala ngokuzenzekelayo kunye nokusetyenziswa kwegesi yensimbi engenasici i-stainless steel flexible imibhobho yokudibanisa izitofu (eyaziwa nangokuthi "iisethi ezintathu zezixhobo zokukhusela ukhuseleko"), ngaphandle koko aziyi kwamkelwa kwaye zinikezelwe.
Njengoko umgaqo-nkqubo upapashiwe ukutyhala “Ikhitshi eliKhuselekileyo loRhwebo“Kuthe kwasungulwa amaphondo amaninziIialamu zokuvuza kwegesi yoRhwebouvukelo.Chengdu ACTION hamba ngokukhawuleza ukubuyisela iimveliso ezingahambelaniyo kwimarike.I-Bellows zezinye iimeko esizenze mva nje.
Kubathengi be-LPG cylinder, sikwabonelela ngesisombululo ngeevalvu ezikhethekileyo ze-solenoid ze-LPG ukudibanisa neIialamu zokuvuza kwegesi yoRhwebo eziZimeleyoAEC2335.Abathengi banelisekile kakhulu ngempembelelo yayo egqwesileyo kwisicelo.
Ke ukuba ungumntu onoxanduva kwindawo yokutyela yorhwebo, qinisekisa ukhuseleko lwabathengi bakho kunye nabasebenzi.Cebisa yonke into onokuthi uyibuyisele endaweni enjaloiialamu zokuvuza kwegesi yorhwebo!
Sindwendwele apha- www.actiongasdetector.com
Sifowunele ku- +86 12-8156-3097
Drop us your query at info@actiongasdetector.com ; shonna@actiongasdetector.com
Ixesha lokuposa: Apr-22-2022
umtshini wegesi onokutsha, umtshini wegesi osisigxina, Isikhangeli segesi se-lpg, IAlam yerhasi etshayo, China Gas Detector, isixhobo segesi,